Ciyaarta SNAP ee Suuqyada Beeralayda - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta
Wax badan ka hel SNAP-kaaga faa'iidooyin!
Fidi faa'iidooyinka SNAP-kaaga adoo ka soo iibsanaya cuntooyin cusub suuqa beeralayda deegaankaaga!
Iyadoo badi suuqyada Beeralayda Oregon ay aqbalaan faa'iidooyinka SNAP (sidoo kale loo yaqaano Kuubannada Cuntada, EBT ama Oregon Trail), qaar badan ayaa sidoo kale bixiya barnaamij isku mid ah, kaas oo labanlaabaya SNAP inay ku iibsadaan dollarka dollarka ilaa xad go'an - taasoo la macno ah inaad heli karto $10 oo cunto ah. kaliya $5 laga helo akoonkaaga SNAP.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan ka bilaabida barnaamijka dhiirigelinta SNAP suuqa deegaankaaga, booqo Ururka Suuqyada Beeralayda ee Oregon hagaha qorsheynta. Waad ku mahadsan tahay wada-hawlgalayaashayada Sanduuqa Suuqa Beeraleyda iyo Ururka Suuqa Beeraleyda ee Oregon si lagaaga caawiyo soo ururinta macluumaadka hoose-ka eeg iyaga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan suuqyada beeralayda ee Oregon.
Ma doonaysaa inaad ka bilowdo barnaamijka dhiirigelinta SNAP suuqa deegaankaaga?
Booqo Ururka Suuqyada Beeralayda ee Oregon si aad hagaha qorshaynta u hesho
Wax badan ka baro SNAP suuqyada beeralayda
Akhri qoraalkayagii ugu dambeeyay ee ku saabsan mowduuca
Soo hel suuqa beeraleydaada maanta!
Ka hel suuqa beeralayda ee ka qaybqaadanaya liiska laga bilaabo Double Up Food Bucks
Suuq kastaa wuxuu leeyahay tilmaamo ku saabsan sida loo isticmaali karo dollarka u dhigma. Weydii shaqaalaha suuqa ama tabaruceyaasha wixii tafaasiil ah. Ka hubi shabakad kasta oo suuqa beeralayda ah si aad u hesho tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyadooda u dhigma, maadaama faahfaahintu ay kala duwanaan karto.